PSJTV | ज्युँदी महिलालाई पनि मृत प्रमाणित !
बाटुलीमाया चेपाङको नागरिकतामा जन्म मिति २००१ साल छ । उनले राज्यले दिने बृद्ध भत्ता बुझ्दै आएकी थिइन् । गएको साउनमा आफ्नो भत्ता लिन उनी वडा कार्यालय पुगिन् ।
कालिका नगरपालिका ११ वाङथालमा उनको घर छ । घरदेखि दुइ घण्टा परको वडा कार्यालय पुग्दा कर्मचारीले उनलार्य बृद्धभत्ता नपाउने बताए । वडा कार्यालयमा उनको मृत्यु भएको विवरण पुगेको कान्तिपुरमा खबर छ ।
मरको मान्छेले कसरी भत्ता पउने ?
बृद्धा बाटुली गाउँमा बिलौना गर्दै हिँड्न थालिन् म त मरी सकेछु । अबदेखि भत्ता पाउन्न रे । केहि युवाले सोधखोज गर्दा पत्ता लाग्यो बाटुलीको निधन ०७४ सलको पुस १७ गते भएको कागजपत्र वडा कार्यालयमा रहेछ ।
जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्वीकार !
काठमाडौं: सर्वसाधारणको भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा अख्तियारले सेवाग्राहीको भेषमा जासुस खटाउने भएको छ। छिटो सेवा प्रवाहका नाममा घुस लिने कर्मचारीलाई सुधार्न आयोगले नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको छ। मालपोत, यातायात, कम्पनी रजिष्ट्रारको ...
एजेन्सी : छालाको सेवासियस भनिने तेल ग्रन्थीमा ब्याक्टेरियाको संक्रमणमा भएपछि फुल्ने र पिप जम्मा हुने अवस्थालाई हामी डन्डिफोर निस्केको भन्छौं । तेल ग्रन्थीले अनावश्यक रूपमा धेरै तेल उत्पादन गर्नु नै डन्डिफोरको ...
टोक्यो : चिनियाँ प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै अमेरिका, जापान, भारत र फिलिपिन्सले दक्षिण चीन समुद्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका छन्। संयुक्त सैन्य अभ्यासमा अमेरिकाको एउटा मिसाइल डेस्ट्रयाेयर, जापानको बमवर्षक विमानवाहक युद्धपोत, भारतका २ ...